Mpanamboatra milina fametahana sinoa ambony any China - Masinina MAIWEI
Momba an'i Maiwei
Masinina plastika mitsoka plastika
Masinina fanaovana tavoahangy rano plastika
PET Preform bobongolo
Masinina fanaovana preform PET
Masinina mitsoka tavoahangy PET ambony, bobongolo mialoha ny PET ary mpanamboatra milina fanosotra Extrusion any Shina
Kalitao avo, Haingam-pandeha, Mihazakazaha malefaka & Milamina.
100% Aorian'ny fanohanana ny varotra miaraka amin'ny fametrahana sy fiofanana
ny Tsara sy azo itokisana Masinina fanaovan-tsofina & Bobongolo mialoha Mpanamboatra any Sina
Mihoatra ny 20 taona ny fanandramana amin'ny famokarana
Mpanjifa mihoatra ny 1000 any amin'ny Faritra 100
Masinina mitsoka tsirairay & bobongolo mialoha ny fanamboarana mari-pahaizana ISO & CE
Fametrahana teknisiana ao amin'ny tranokala & Fitaovana maimaimpoana maharitra roa taona
Alefaso izao ny fanontanianaoAnontanio ny injenierantsika izao
Mpanamboatra MAIWEI ary famonosana sahaza sahaza
Vahaolana ho an'ny orinasanao
Masinina fametahana tavoahangy PET
Antsipiriany bebe kokoa momba ny teknolojia
Masinina fanenoman-tsofina Extrusion
Momba an'i MAIWEI, mpamokatra sy mpamatsy anao mitsoka mafy indrindra
Maiwei dia mpanamboatra matihanina Masinina mitsoka tavoahangy PET & Masinina mitsivalana mitsoka mihombo ary Masinina fanaovana preform PET any Shina, manana traikefa amin'ny famokarana maherin'ny 20 taona amin'ny milina mitsoka sy Bobongolo mialoha. Misy mpiasa mahay 100 ary Teknolojia mandroso 20 ao amin'ny Orinasanay. Manana karazana milina mitsoka tavoahangy PET sy milina fanosorana Extrusion Moll rehetra isika. Ny ankamaroan'ny mpanjifanay dia mividy milina sy bobongolo fanindroany sy fahatelo.
Tongasoa eto hitsidika an'i Maiwei Factory
Tongasoa anao tsara hitsidika ny atrikasa famokarana ho an'ny milina mitsoka sy ny bobongolo mialoha
Maninona i Maiwei no atokisan'ny 1000+ tavoahangy plastika eran-tany, Preform, mpamokatra vokatra plastika?
Masinina mitsoka mafy sy fitaovana mialoha ny bobongolo ary fitaovana fanodinana
Maiwei dia manana fitaovana fanodinana 100 ary afaka manamboatra milina mitsoka 500 sy setroka bobongolo preform 200 isan-taona, miantoka ny fandefasana azy ara-potoana.
Maherin'ny 20 taona ny fanamboarana masinina ary ny fanandramana fanondranana
Manana traikefa mihoatra ny 20 taona isika amin'ny fanaovana milina mitsoka sy bobongolo mialoha ny PET, ary ny masinina sy ny lasitra entintsika dia manondrana any amin'ny firenena maherin'ny 100, toa an'i Indonezia, Malaysia, Saudi Arabia, Kenya, tanzania, Nigeria, amerika, Mexico, Argentina, Silia.
Sehatra matanjaka an'ny milina Maiwei
Maiwei mitsoka fefy sy lampy no mavesatra dia mavesatra kokoa noho ny hafa, miantoka tsy hisy hovitra mandritra ny famokarana tavoahangy io
Fivarotana haavo avo lenta mihaona amin'ny CE Standard sy ny faritra marika lehibe
Ny fizotrany sy ny fitsaboana ny faritra tsirairay amin'ny milina sy ny bobongolo.
Ny faritra tsirairay amin'ny milina mitsoka antsika dia voafantina tsara sy voatsabo tsara.
Fanohanana feno aorian'ny serivisy fivarotana
Maiwei dia mandefa kojakoja ampiasaina ho anao mandritra ny herintaona farafahakeliny miaraka amin'ilay masinina, ho an'ny faritra mora mitafy rehetra, azo atolotra ao anatin'ny herinandro iray, ny teknisianina dia azo alefa any amin'ny orinasa misy anao hametraka milina sy bobongolo. Serivisy an-tserasera 24 ora.
T / T, Western Union, Banky An-tserasera, LC tazana, Na LC 3-12 volana aza manaiky
Tetikasa farany farany ho an'ny fanovozan-kevitrao eo amin'ny tsena manerantany
SC-F4, 4 lavaka milina PET mitsoka mitsofoka mandeha ho azy.
Jereo ity mpanjifa ity
SC-2S5L, Masinina mitsoka extrusion mandeha ho azy.
SC-F6, milina mitsoka mandeha ho azy sy milina fanamboarana PET Preform
SC388, 48 Cavity PET Preform fanaovana tsipika
Aorian'ny fivarotana varotra ho an'ny didinao
2 taona mora tapaka tapaka faritra maimaim-poana
Boky torolàlana amin'ny boky Anglisy sy Torolàlana momba ny horonan-tsary
Fametrahana teknisiana ao amin'ny orinasa mpanjifa
Serivisy an-tserasera 24/7
Vahaolana tonga lafatra ho an'ny fonosanao misy ranoka
Maiwei Supply ianao mamolavola drafitra drafitra sy serivisy fikaonan-dàlana ho an'ny tsipika fisotro rano, tsipika fisotroana, ary tsipika fanangonana ranon-javatra hafa misy milina mitsoka extrusion avo lenta, milina mitsoka PET, ary milina fanaovana preform PET. Tongasoa handefa anao ny fanontanianao izao.
Raiso ny vahaolana arahin'asanay
Mifandraisa amin'i Maiwei amin'ny famokarana vokatra plastika
Momba ny Orinasa Maiwei?
Maiwei dia masinina mitsoka tavoahangy PET, milina fanenomana plastika, bobongolo PET Preform, bobongolo Cap, milina fanaovana preform, ary mpamatsy milina famenoana ao Shina nanomboka tamin'ny 2000.
Fa maninona no mifidy Maiwei?
Fandefasana baiko ara-potoana, kalitao avo lenta, milina miasa milamina ary milamina, antoka 2 taona. Amin'ny vidiny mirary.
Inona no atao hoe Maiwei?
Drafitra famolavolana sy fametrahana fametrahana tsipika feno ho an'ny vahaolana fonosana plastika sy ranon-javatra.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny milina mitsoka anao sy ny bobongolo?
Alefaso aminay miaraka amin'ny refy ny vokatrao, lazao anay ny fangatahana fahaizanao mamokatra, afaka manolotra masinina sahaza anao izahay.
Manao ahoana ny serivisinay aorian'ny varotra?
2 taona fanampiny, injeniera misy any ampitan-dranomasina hametrahana ny masininao sy hampiofana ny mpikirakira anao, hitarika anao amin'ny fikojakojana ireo milina sy bobongolo.
Ny fanohanana ara-bola anay?
3-12 volana LC dia azo ekena.
Mifandraisa amin'ny ekipa mpanohana anay
Maiwei no mpanamboatra ny masinina fanaovana tavoahangy plastika, milina mitsoka PET, bobongolo mialoha ny PET, milina famonosana ao Shina nanomboka ny taona 1998, manondrana milina mitsoka 300 sy setra bobongolo miisa 200 any amin'ny firenena 100 mahery isan-taona.
Araho & zarao
Masinina fanaovan-tsora vita amin'ny Extrusion
Masinina fanaovana tavoahangy PET
Milina fanamboarana tavoahangy PET
Masinina plastika mitsoka koronosy
Milina tavoahangy fisotroana tavoahangy
Masinina fanaovana tavoahangy plastika
Masinina fanenoman-tsofina Extrusion ho an'ny plastika plastika
No.888 Huangjiao Road, Huangyan, Taizhou City, Faritanin'i Zhejiang, China PC 318020
© Copyright 2021 Maiwei-machine * Zo rehetra voatokana.